अहँ ! सुरक्षित छैन बैंकमा पैसा
ARCHIVE, BANKING, OFF THE BEAT » अहँ ! सुरक्षित छैन बैंकमा पैसा
क्लोन म्याग्नेटिक कार्ड अर्थात डुब्लिकेट एटीएम कार्ड, यही डुब्लिकेट कार्ड प्रयोग गरेर बैंकबाट करोडौं रुपैयाँ चोरी हुने गरेको छ । झट्ट सुन्दा पत्याउन गाह्रो हुन्छ, तर यस्तै प्रकृतिका केही घटना सार्वजनिक भएका छन् । बैंकका खाताहरूमा राखिएको तपाईं–हाम्रो पैसामाथि यतिबेला भर्चुअल चोरहरूले कुदृष्टि लगाउन थालेका छन्।
मिङमा र केवलप्रताप मेसिन लिएर गए । उनीहरूले स्वाइप मेसिनमा ४७ लाख रुपैयाँ घोटे तर उक्त मेसिनबाट ४ लाख रुपैयाँ मात्र ट्रान्सफर भयो । त्यसपछि उनीहरूले उक्त रकम लिक्वायर कम्पनीको खातामा ट्रान्सफर गराएर त्यही मूल्य बराबरको रक्सी लिएर गए । उक्त रक्सी मिङमाले बेचे र त्यसबाट आएको पैसा सबैले भागबन्डा गरे । पर्सिपल्ट लिक्वायर कम्पनीका मालिक अर्थात् मिङ्माका दाजु उक्त ४ लाख रुपैयाँ निकाल्न बैंक गए, तर बैंकले फ्रड भएर आएको रकम भन्दै दिन मानेन । त्यसपछि उनी प्रहरीकहाँ पुगे । प्रहरीले उनको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दै जाँदा उक्त गिरोह नै फन्दामा पर्‍यो । गिरोहमा संलग्न मिङमा भने अहिलेसम्म फरार छन् ।
कि प्याड नजिक प्वाल जस्तो देखिए उक्त प्वालभित्र पिनहोल क्यामेरा जडान गरिएको हुनसक्छ । एटीएम कार्डको म्याग्नेटिक स्ट्रिपमा रहेको डाटा कपी गर्न जेन्युअन कार्डबाहेक अन्य कार्ड स्लट पनि जोडिएको हुनसक्छ । एक भन्दा धेरै कार्ड स्लट देखिए त्यस्तो एटीएम बुथबाट पैसा निकाल्नु हुँदैन । खातामा पैसा हुँदाहुँदै पनि पैसा आएन भने नक्कली कार्ड स्लटमा आफ्नो कार्ड छिराइएको हुनसक्छ ।
आफ्नो कार्ड नक्कली कार्ड स्लटमा छिराइएको थाहा पाउनेबित्तिकै तत्काल अर्को एटीएम बुथमा गएर आफ्नो पिन नम्बर परिवर्तन गर्नुपर्छ । कि प्याड अस्वाभाविक जस्तो लागे तथा मेसिनमा राम्रोसँग फिट नभएजस्तो लागे उक्त एटीएम बुथबाट कारोबार नगर्ने । एटीएम बुथभित्र अस्वाभाविक उकरणहरू जडान गरिएको देखिए तत्काल नजिकको प्रहरी कार्यालय तथा सम्बन्धित बैंकमा खबर गर्ने । पिन नम्बर हान्ने बेलामा कोही कसैले हेरे–नहेरेको यकिन गर्ने । पिन नम्बर डायल गर्दा हातले छोपेर सुरक्षित तरिकाले मात्र डायल गर्ने ।
यसै क्रममा अघिल्लो बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी घनश्याम अर्याललाई काठमाडौँबाट फोन आयो । फोनमार्फत आएको नयाँ जानकारीअनुसार उनले आफ्नो मातहतका प्रहरीलाई खबर गरे । त्यस क्रममा एक विदेशी प्रहरीको शंकाको घेरामा परे । ती विदेशी नागरिकको फलो गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र वडा प्रहरी कार्यालय बैदामको टोली सक्रिय भए । शुक्रबार साँझ ७ बजे ती विदेशी लेकसाइड, गौरीघाटस्थित एटीएम बुथमा छिरे । त्यसपछि बाहिर निस्किए र स्कुटर चढे । प्रहरीले उनलाई पछ्याइरहेको थियो ।
काठमाडौंमा एटीएम ठगीमै बुल्गेरियन, टर्किस, भारतीय, बंगलादेशी तथा पाकिस्तानी नागरिकहरू पनि पक्राउ परिसकेका छन् । बैंक कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा नेपालमा एटीएममार्फत ठगी भएका घटना पनि बेलाबेलामा बाहिर आउने गरेका छन् । - कान्तिपुर साप्ताहिकबाट